Jubbaland oo sheegatay inay gacanta ku hayso Balad Xaawo - Axadle Raadiyaha
Hogaamiye ku xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa BBC u sheegay in ciidamada maamulka oo uu wehliyo wasiirkooda amniga Cabdirashiid C / nuur Janan ay la wareegeen degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo.
Maxamuud Sayid Aadan ayaa sheegay in ciidamada la socday Janan lagu weeraray duleedka Balad Xaawo, laakiin ay iska caabiyeen oo ay u suura gashay inay gudaha u galaan magaalada.
“Xalay saqdii dhexe, ciidamada Daraawiishta Jubbaland ee duleedka Balad Xaawo ilaa iyo weerarkii March 2, 2020 way iska caabiyeen, waxayna la wareegeen gacan ku haynta magaalada, ciidamadii ka yimid Muqdisho waa la iska caabiyey. ayaa wali ka socota daafaha magaalada. Sidaas waxaa yiri Maxamuud Sayid Aadan.
Hogaamiye ku xigeenka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa sheegay in dhowr jeer ay iska ilaaliyeen dagaal ka dhaca Balad Xaawo laakiin sedexdii maalmood ee la soo dhaafay ay la kulmayeen dhaq dhaqaaqyo xoogan iyo abaabul duulaano ka dhan ah.
“Ma naqaano inaan la dagaalameyno Al-Shabaab iyo in kale. Falaagada indhaha ka xiran ee Muqdisho ka timid ayaa na soo weeraraya. Magaalada kuma degno oo dagaalkuna wuu soconayaa. Dowladda Federaalka ayaa qaadi doonta mas’uuliyadda wixii ka yimaada.” ayuu yiri Maxamuud Sayid Aadan.
War ka soo baxay dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in jabhad ay abaabushay dowladda Kenya ay weerartay degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo, sida lagu sheegay war qoraal ah.
DFS: Maleeshiyo ay taageerto Kenya oo weerartay Balad Xaawo – Axadle Raadiyaha